Kuzvimiririra Kwemari Ratio | Ehupfumi Zvemari
Claudi casals | | General hupfumi, makambani
Kuzvimiririra kwemari kugona kwekambani kana munhu kwete kuvimba nemari yemunhu kuti agutse zvinangwa zvake. Zvehupfumi zviyero zvinotishandira isu senge hombe accounting account kuongorora hupfumi nyika dzinogona "kuomarara" pakutanga. Saka nekutarisa kumwe chete tinogona kuona kuti zviri nyore kana zvakanaka sei zviri kuverengwa. Kune ino nyaya uye chinyorwa, isu ticha tsanangura zvese nezve chiyero chemari chekuzvimiririra.
Mushure mekuverenga chinyorwa, iwe unenge uine pfungwa izere nezve iyo mari kuzvimiririra chiyero, kuti ungaiverenga sei uye zvazvinoreva kune kambani. Nekuda kweichi chiyero, sarudzo dzinogona kutorwa dzinogona kuve dzakasimba zvakanyanya iyo reshiyo. Pane zvinopesana, mashoma sarudzo anotariswa anogona kuitwa kana degree rezvemari kuzvimiririra rakadzikira. Iyo inoshandawo senzira yekushandisa zvinoenderana nemakambani ekuverenga kuti akanyatsogadzirisa sei zviwanikwa zvavo zvinopesana nechikwereti. Kuti uinzwisise zvizere, ramba uchiverenga kusvika kumagumo.
1 Ndeupi muyero wekuzvimiririra wezvemari?
2 Fomula yekuverenga chiyero chemari yekuzvimirira
3 Nzira yekududzira chiyero?
3.1 Kuwedzera kwechikwereti kunokanganisa sei chiyero?
Ndeupi muyero wekuzvimiririra wezvemari?
Kuenzana kwemari yekuzvimiririra inoedza kutsanangura kutsamira uko kune kambani kune avo vane chikwereti, kureva kuti, kune waunokwereta mari, chikwereti. Uku kuverenga kunosanganisira kuona kuenzana kune iyo kambani zvine chekuita nechikwereti chayo. In consecuense, iyo ratio inotipa hukama nekugona kwavo kukwereta. Iyo yakakwira ichi chiyero, iyo yakakura iyo kambani kugona kurarama mune ramangwana, kunyanya tichifunga kuti kusava nechokwadi zviitiko zvinogona kumuka pane imwe nguva. Muenzaniso wakanaka ingave nharaunda yazvino yatiri kuenda nayo uko denda rinoisa izvi zviyero pamuedzo. Makambani ane chiyero chakanaka chekuzvimiririra anogona kunge asina kunyanya kukanganiswa pane avo vane chiyero chaive chisina kunaka pamberi pematambudziko anogona kuitika.
Vamwe vanhu vanoshandisa mazwi ekuti "Kuenzana" kutaura "Kuenzana", hazvina basa. Chinhu chakakosha ndechekuti kunyangwe tikashandisa rimwe kana mamwe mazwi tinosvika pakureva chinhu chimwe chete. Mune ino kesi, kuti uzive kuenzana, zvinodikanwa kubvisa huwandu hwese hwezvikwereti (chikwereti) kubva kune akazara zvinhu.
Fomula yekuverenga chiyero chemari yekuzvimirira
Sezvatakambotaura kare, ihwo hukama pakati pekuenzana uye chikwereti. Iyo fomula inoverengwa Kugovaniswa Kwekuenzana kubva pazvikwereti zvese (chikwereti) zvese zvipfupi uye zvenguva refu. Iyo inoguma nhamba ndiyo chiyero chemari kuzvitonga. Kuti tinzwisise zvirinani, tiri kuzopa muenzaniso nemakambani maviri atinofungidzira kuti anobva muchikamu chimwe chete. Semuenzaniso, makambani anozvipira kutakurwa kwevanhu.
Muchiitiko chekutanga, isu tinowana kambani ine huwandu hwayo muhuwandu hwakazara ku1.540.000 euros. Chikwereti chayo chose chinosvika ku2.000.000 euros. Izvi zvinoreva kuti isu tinogovanisa yavo pachezvayo nechikwereti, ndiko kuti, zvikwereti zvavo, tinowana 0,77. Ichi chingave chiyero chekuzvimiririra kwemari.
Yenyaya yechipiri, isu tine kambani iri diki muhukuru uye ine equity ye930.000 euros. Ipapo isu tine kuti chikwereti chake chose chinosvika mazana maviri nemakumi mana ezviuru euros. Mushure mekukamura iyo equity nechikwereti chayo, isu tinowana kuti ine chiyero chemari chekuzvimiririra che240.000
Kune ino kesi uye muenzaniso, ini ndakaedza kuisa imwe yakati "inozivikanwa" kesi, iya yemuenzaniso wechipiri. Kune rumwe rutivi, taizoona kuti huwandu hwekambani yechipiri hwakanyanya sei, hwe3. Iyo yakagadzikana zvakanyanya mune zvemari, pane izvo hapana mubvunzo. Nekudaro, inogona kukura zvakanyanya, asi izvo zvese izvo zvingangove zviripo nenzira yakavanzika, hazvizove kutora mukana nazvo.
Nzira yekududzira chiyero?
Kazhinji, kambani inonzi ine kuzvitonga kuzere mune zvemari kana inopfuura hafu yezviwanikwa zvayo ichibva mumari yayo. Asi kuti uwane zano, huwandu hushoma hwechiyero ichi chinotarisirwa kuve nekambani hunofanirwa kunge huri 0 kana kupfuura. Chiyero chiri pakati pe0 na7 "kazhinji" ndiyo yakajairika uye zvakare kukosha kwakanyanya.
Kune rimwe divi, kambani yaizove nemari uye zviwanikwa zvekutarisana nenguva dzakaoma. Idzi nguva dzinogona kunge dzisina kuoma, asi kudzikisira kuchengetedza kwako uye kuzvivimba zvakanyanya hazviwanzo kutungamira kumhedzisiro. Kune rimwe divi, tinenge tisingataure nezve chikwereti chakakura kwazvo, izvo zvinoreva kuti ine kuzvitonga kuzere kwemari uye kana ichida kana hupfumi haizoise kupona kwayo panjodzi. Neichi chikonzero, kuva kana kuyedza kuchengetedza huwandu hwakakura kwakakosha, sezvo ichimiririra chiratidzo chesimba uye kugadzikana.
Se data, inofanirwa kuwedzerwa kuti hapana chiyero chekuzvimiririra chemari chinoshanda kumakambani ese. Chikamu chega chega chakasiyana, uye zvinoenderana kwete nemunda wauri kushanda chete, asiwo pamakwikwi uye nezvinangwa zvebhizinesi zvazvino zvenguva yega yega.
Kuwedzera kwechikwereti kunokanganisa sei chiyero?
Tichifunga nezve mienzaniso yemakambani maviri ataurwa pamusoro, taigona kuona kuti kambani yechipiri ingakwereta zvakadii. Ngatizvionei nemaonero. Kana mamirioni euros akakumbirwa kudyara uye / kana kutengwa kwemidziyo, kukosha kwekambani kwaizokwira kubva pamamiriyoni e1 (midziyo yayo isati yabvisa chikwereti kuti izive mambure akakosha) kusvika ku1.170.000 euros.
Chikwereti chaizokwira kusvika ku1.240.000 euros (iyo € 240.000 pamwe neyekuwedzera € 1.000.000). Mambure ake akakosha anoramba ari pa930.000, 930.000. Izvi zvinoreva kuti yako yekuzvimiririra yezvemari reshiyo yaizove € 1.240.000 yakakamurwa ne € 0 ingave 75. Zvinenge zvakafanana, seyenyaya yekambani yekutanga.
Zviripachena kuti kuverenga uku kuri nyore nenhamba dzakatenderedza, uye muchokwadi makomisheni nemitero yakatorwa kubva muzvikwereti nekutora zvinhu zvaizofanirwa kudzikiswa kubva kune hwese zvinhu. Asi kana zvasvika pakugadzirisa mashandiro ehupfumi, tinogona kuona kuti ikozvino kambani yechipiri yave nekaviri zvakapetwa muhukuru. Naizvozvo, yako turnover ichave yakakwira uye yako yekushandisa mari kuyerera ichawedzera, zvichikubvumidza iwe kuti uwedzere kupfuura pakutanga. Panguva imwecheteyo, ichave iine zviwanikwa zvayo kutarisana nenguva yakaoma, asi chiyero chekuzvimiririra chinoratidza izvo Kukwereta zvakawanda kunogona kuva nenjodzi uye hazvingakurudzirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Kuzvimiririra Kwemari Ratio